ဆရာမဘေဘီတိုး (ခေါ် ) နန့်အေးအေးသည် ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး ကျုံးပျော်မြို့နယ် အင်းရဲကျွန်းကျေးရွာရှိ အဘဦးစောဘတိုးနှင့် အမိဒေါ်မယ်တိုး တို့မှ မွေးဖွားပြီး မွေးခြင်း (၇) ယောက်မှ (၅) ယောက်မြောက် သမီးဖြစ်ပါသည်။မူလတန်းပညာကို အ.လ.က (၁) ကျုံးပျော်မြို့၌လည်းကောင်း၊အလယ် တန်း ပညာကို လှည်းဆိပ် အ.လ.က နှင့် အင်းစိန် အ.လ.က (၁) ၌ လည်းကောင်း၊...
သိက္ခာတော်ရဆရာဦးခမ်ခန့်လျန်းထန်ကိမ်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် တွင် အဘ – ဦးဂင်ဒိုထန် နှင့် အမိ – ဒေါ်လွင့်ခန့်ဝုန် တို့၏သား(၄)ဦးအနက်ဒုတိယသားဖြစ်ပါသည်။
Rev. Pau Kim Sang
သိက္ခာတော်ရ ဆရာပေါင်ကင်းဆန်ကို ဦးနိန်ခိုဟောက်နှင့် ဒေါ်ဇင်ခိုညန်တို့မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ်၊ နန်းဟံနွဲ့ကျေးရွာ တွင် မွေးဖွါးခဲ့ပါသည်။ မွေးချင်းမောင်နှမ ရှစ်ယောက်အနက် ဆဌမမြောက်သားဖြစ်ပါသည်။ လေးနှစ်သားအရွယ်တွင် တစ်မိသားစုလုံး ကလေးမြို့သို့ ပြောင်းရွေ့ပြီး၊ ကလေးမြို့တွင် ကြီးပြင်းခဲ့ပါသည်။
Rev. Lom Zom Niang
ဆရာမ လွင်ဇွမ်ညောင်ကို ဆရာညောင်လို့ပဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ Worship Leader တစ်ဉီးဖြစ်ပြီး အဆိုတော်တစ်ဉီးလဲဖြစ်ပါတယ်။တီးတိန်မြို့နယ် ဂေါ်စိန်းကျေးရွာရှိ ဦးဂင့်ဇစိန်နှင့်ဒေါ်ကျင်းခေါ်နိန်တို့၏သမီးဖြစ်၍ မူလတန်းပညာကို တီးတိန်မြို့နယ်ဂေါ်စိန်းကျေးရွာ၊ အလယ်တန်းပညာကို တီးတိန်မြို့နယ် ကျိန်းပီးကွတ်ကျေးရွာနှင့် တီးတိန်မြို့ စကောလမ်း အ.ထ.က (၁)၊ အထက်တန်းပညာကို အထက ( ၂ ) ကလေးမြို့ မှာ သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
သိက္ခာတော်ရဆရာမဉာဏ်ဇွမ်းမာန်သည် ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်၊ လိုင်တွီးကျေးရွာတွင် အဘ Dr. Sian Za Kam နှင့် အမိ Daw Ning Za Ginတို့၏ သားသမီး(၅)ဦးအနက်အကြီးဆုံးသမီးဖြစ်ပါသည်။